OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION: October 2012
US's lost moral compass in Myanmar
The flaws in the US approach are threefold, including: (1) failing to understand the unambiguous, enduring power of ethnic.
populations; (2) failing to engage them fully as equal stakeholders in the country's future; and (3) forgetting that many have been faithful American allies going all the way back to World War II.
Nobel Peace Prize winner Suu Kyi, meanwhile, has deliberately avoided drawing attention to the Kachin situation, apparently because she feels it detracts from the big picture move to democracy from military rule.
It is an awkward point to raise given the good prospects unfolding in Myanmar. But it should bealegitimate concern for US policymakers, no matter how inconvenient it may be for those in the Obama administration who want to turn the page on past poor relations and strengthen ties for wider strategic considerations.
"Live Free or Die" is the motto at the entrance to one ethnic resistance force encampment in the remote jungle mountains of eastern Myanmar, words that resonate deeply in the US. They are words that Myanmar's ethnics have affirmed atabloody cost of thousands of torched villages, over 400,000 internally displaced persons and over 800,000 forced laborers in eastern Myanmar alone, according to independent rights groups. Nobody has yet been held to account for those crimes. Ongoing attacks against Kachin villages are consistent with this record of violence and impunity.
This is particularly so since many of Myanmar's ethnic groups have consistently carried pro-democracy banners in their fight againstasuccession of abusive military-led regimes. Many have done this with the idea that America and its Western allies were champions of their cause.
America's global stature and legitimacy are ultimately at stake. After the interventions in Iraq and Afghanistan, although not military in nature, the US needs to get its Myanmar policy right to restore confidence in its global diplomacy and intentions. America's "pivot" is already being tested in Myanmar, and in many important ways it's already on the wrong track.
Tim Heinemann isaretired US Army officer and strategist who does volunteer assistance work in support of ethnic pro-democracy groups in Myanmar.
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 4:46 PM No comments:
Aung San Suu Kyi is the worst person in Burma.
Whatashocking statement! How could I say suchathing, about The Lady, Mother Suu, Aunty Suu, the revered Nobel laureate, and the leader of all peace-loving Burmese?
Why wouldn't I pick one of the many Burma Army soldiers in Kachin State, who kidnap women from villages and fields, and take them to their units to be gang-raped every night? (When the women are so broken that evenarapist can no longer get aroused, they are executed.)
Or what about the many, many Rakhine madmen, who so hate the Rohingya people that they want to kill every single one of them, every man, woman and child? (The Rakhine now have their own version of Kristallnacht. They are imitating the Nazi Party's series of pogroms in 1938, whereby one Jewish township after another was attacked.)
And then there is of course Senior General Than Shwe, dark overlord of everything that is happening in Burma, and who must be laughing himself silly at the crimes against humanity, and the fact that there is no international outrage.
But no, I choose Suu Kyi.
The reason for this is that, while she isn't raping and killing people herself, she is nevertheless directly responsible for the carnage because she is the only person in Burma who has the ability to stop it, or ataminimum to reduce its scale.
Suu Kyi is the only person with real moral authority over the Burmans, of which the Army and police are comprised, and the Rakhines. Were she to call loudly and repeatedly for the attacks to end, including for the Rohingya to be protected and for the Burma Army to withdraw from Kachin areas, the violence would subside. (She should ask to speak on national television, and make just such an announcement. If refused permission, she should makeastatement to foreign media.)
Equally importantly, the International Community would no longer be able to avoid the subject. Now, the United States, Europe, and the United Nations are buying the regime's argument, which both the international and Burma media are parroting, that the conflict is fundamentally two-sided, that two large mobs are attacking each other. This isafalse equivalence. When all the townships that are burning, and refugees, are from one side, this is not an equal fight. Moreover, when renowned activists, Buddhist monks, and local students use language reminiscent of Nazi propaganda, something truly catastrophic is underway. Rakhine and Burman racists are essentially seeking their own "final solution."
The International Community is using Suu Kyi's silence as an excuse to disregard the real nature of the conflict. If she spoke out, they would also be forced to condemn the atrocities, and even to support action such as the introduction ofapeacekeeping force.
But, she won't do it, which is why I believe she is the worst person in the country. She has the power to save lives, but she refuses to help. She apparently does not view Rohingya lives, or Kachin, as worth saving.
This week, while the ethnic cleansing in Rakhine State raged, Suu Kyi actually talked to reporters, but her subject was how the Constitution needs to be amended. Why? She cannot run for President in 2015, if it is not. She is focused onalonger-term issue, and which is important to her personally, instead of the fires that are burning out of control.
According to Suu Kyi, the acts against the Kachin and Rohingya are not even human rights violations. Please view the images in the following link. They are of Kachin villagers who were the victims ofaBurma Army artillery strike. Scenes like this are widespread in Burma, but they are rarely photographed. I ask you, are they human rights violations or not
Suu Kyi has stated that she has no power, that she isalowly MP fromaParty that has onlyafew seats in Parliament. However, she gladly accepts the world's highest awards, and public adulation, as the country's real leader.
She can't have it both ways. She does have great power: The power of her voice. If she declines to use it, it would be best if she leaves politics altogether and retires to her house on the lake.
There has already been talk of her legacy. Let's not forget the facts. She threw away the results of the democratic 1990 election. She then ended her boycott of the fraudulent 2010 election (by participating in last year's by-election), thereby giving it legitimacy. And, she took an oath to abide by the completely undemocratic 2008 Constitution.
Furthermore, she will not speak out for the rights of Burma's ethnic minorities. Her actions even ended the call foraU.N. investigation of the regime's human rights abuses. Worst of all, she is now ignoring, and thereby enabling, ethnic cleansing, war crimes, and the incitement of widespread racism.
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 10:34 AM No comments:
KNU Statement (Burmese)
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 10:30 AM No comments:
မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဘာတီးလင့်တ်နာ (Bertil Lintner) နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Interview With Bertil Lintner Dr. Lun Swe website မှကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 3:35 PM No comments:
Despite war against ethnic Kachin, the US invites Burma to observe Cobra Gold
By Zin Linn Oct 19, 2012 6:47PM UTC
The ethnic Kachin people of Burma yearn foraceasefire so as to avoid war crimes in their regions. They are calling forameaningful political dialogue among the stakeholders to reinstate peace in the war-torn state. The government’s armed forces are still committing war crimes and crimes against humanity. The human rights violations of Burmese soldiers in Kachin State, involving rape, forced labour, torture, the killings of civilians, and religious persecution are grave breaches of international laws.
In suchatime of inhumane war in Kachin state, many people are not so happy hearing about the news of Burma military’s observer status with the US’s Cobra Gold,aUS-Thai joint military exercise.
The United States will invite Burma (Myanmar) to observe Cobra Gold, which brings together more than 10,000 American and Thai military personnel and participants from other Asian countries for joint annual maneuvers, Reuters News said Friday.
Burma’s notorious military has robbed 25 per cent of the parliamentary seats by using undemocratic 2008 constitution drawn by itself. Without retreating from the Parliaments, such kind of military did not deserve any reward by the democratic states.
When President Thein Sein of Burma met national races affairs ministers from regions and states in Nay-Pyi-Taw in September, he said that national races live in the country have the basic rights of citizens stated in the constitution.
However, Thein Sein also admitted that ethnic regions still failed to sustain development on education, health, transportation, and the economy due to the long-lasting armed conflicts. There is no rule of law in the conflict ethnic areas, he acknowledged.
Thein Sein highlighted that there has been progress in making peace with the ethnic armed-groups, with the exception of the Kachin Independence Organisation (KIO) and the Kachin Independence Army (KIA).
“Currently, peace negotiations are going on at two levels, the first at region/state concerned. The process at region/state level would be smoother with the participation of all local national races including national races affairs ministers,” the President told the state-run New Light of Myanmar newspaper.
“At the final stage, discussion and decisions would be made at the Parliament,” he added.
The government’s three-step peace plan says that first to make ceasefire at state level talks, second to establishaKachin ethnic political party and third the ethnic party has to put forward the ethnic questions to the parliamentary assembly where the problems have to solved out in line with the 2008 constitution.
However, KIO prefers its own three-step process — the first step would be an agreement on the distribution of troops and their locations; the second step would be an all-inclusive discussion similar to the Panglong Conference in order to work out long-standing political disagreements; the third and final stage would be to enforce the agreement in whatever structure is fitting.
Up to now, armed clashes between the government and the KIA have continued mostly in eastern and central Kachin State. Fighting goes on fatally all through Kachin State in the face of government peacemaking pledge to the United States and the EU. The KIO targets to cut the supply lines of the government troops in southern Kachin state.
The current clashes are taking place in the Kachin state’s western jade rich Hpakant district where the Kachin resistance has claimed major victory over the past few weeks. The government’s control of the Hpakant jade-land has reportedly earned billions in revenue since the early 1990s when the KIO gave up control of most of the area.
According to KIO’s spokesperson and Deputy General Secretary-2,Salang Kaba Lah Nan, the government army has been gearing up foramajor military offensive against the KIO using massive military strength of over 80 battalions.
A 17-year-old truce between the Burmese Government and the Kachin Independence Organization (KIO) collapsed on June 9, 2011, sending many thousands of Kachin war-refugees fleeing toward the Sino-Burma border with no sufficient international humanitarian assistance.
This is in addition to the more than 62,000 people displaced within Burma, including 24,000 in government-controlled areas, and close to 40,000 in KIA-controlled areas, the UN estimates.
KIO has persistently asked the government to withdraw its troops toward the line agreed upon in the 1994 ceasefire agreement to show its peace proposal is sincere and genuine. The most recent battles took place in the KIO’s territories acknowledged during the 1994-2011 ceasefire period.
If Burma Army refused to withdraw from the KIO’s territories of 1994 truce, the United States should not invite Burma to observe Cobra Gold maneuver.
Ko Aung Hmine s Article 20 Oct 2012
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 7:53 AM No comments:
Nippon Foundation meeting with UNFC in Tokyo
TOKYO, Oct. 18, 2012 -- Twenty key members of the United Nationalities Federal Council (UNFC), an alliance of Myanmar's armed ethnic minority groups based in Chiang Mai, Thailand, met in Tokyo on October 18 with officials of the Nippon Foundation to discuss details, including allocation and transportation, of the $3 million emergency humanitarian aid agreed earlier between the UNFC and the foundation.
7 year old Bawm Hkaw
Wound to hand
ကချင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော် စိုးရိမ်မိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အဖြေစကား
Agreement Final for Signing
UN - Situation of Human Rights in Myanmar
အစိုးရတပ်မတော်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည်မှာ တနှစ်နှင့် သုံးလ ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နေသော် လည်း အဆင်မပြေသေးပေ။ လတ်တလော အနေအထားတွင်လည်း တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လျက် ရှိနေသော ကြောင့် ယင်းတိုက်ပွဲအခြေအနေများနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းမှု အဆင်မပြေ ဖြစ်နေရသည့် အခြေအနေများကို ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (ကေအိုင်အေ) ၏ ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်နှင့် The Voice Weekly တို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်များမှ ကောက်နုတ် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Voice : အစိုးရတပ်နဲ့ ကေအိုင်အေ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ တနှစ်ကျော်နေပြီ။ တချို့ကလည်း ခုဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲက ခွဲထွက်ရေးအတွက် တိုက်နေတယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ နားလည်ထား တာက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် တောင်းတယ်လို့ ကြားထားပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ တိကျတဲ့ သဘော ထားကို ပြောပြပေးပါခင်ဗျ။
GGM : ကချင်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံလို့ ပေါ်ထွက်လာအောင် အစကတည်းက ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ ကချင်တွေ ပါခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပြည်ထောင်စုကနေ ခွဲထွက်ရေးလို့ ပြောတဲ့ အထဲမှာ ကချင် မပါဘူး။ ဦးအောင်မင်းကိုလည်း ပြောခဲ့တယ်။ ပြည်ထောင်စု ဆိုတဲ့ စကားကို ကျနော် တို့ ပြောခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ခဲ့ပြီ၊ သိပ်ပင်ပန်းနေပြီလို့ နောက်ခဲ့သေးတယ်။ ပြည်ထောင်စုနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်လို့ ပြောလိုက်ရင် ပြည်ထောင်စု ခွဲထွက်ရေးလို့ နားလည်ကြတယ်။ ဒါက ကချင် တွေ ရဲ့ Concept ပဲ။ ခု ပြောနေကြတာလည်း ပြည်ထောင်စုအရေးပဲ။ ကေအိုင်အိုက ဘယ်လောက် တောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လုပ်ခဲ့သလဲဆိုရင် ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကို လက်ခံမယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေး။ ဒီမှာ မူထိတယ် ဆိုပြီး စေ့စပ် ကြောင်းလမ်းရေး ပျက်ခဲ့တာ ဒီနေ့ထိပဲ။ ၁၉၉၄ တုန်းက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စေ့စပ်ပွဲလုပ်တယ်။ နိုင်ငံထဲမှာ အခြေခံဥပဒေတရပ် ပေါ်ထွက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရအောင်လို့ ပြောရင် လက်မခံခဲ့ဘူး။ အစိုးရနဲ့ လုပ်။ သူတို့က အာဏာသိမ်းထားတဲ့ တပ်မတော်အစိုးရလို့ ပြောတယ်။ ၂၀၀၈ ကုန်ခါနီးမှာ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် နယ်ခြားစောင့် တပ် ဖွဲ့ဖို့ ပြောတယ်။ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ဆိုတာက နိုင်ငံရေးဝေါဟာရ ဖြစ်တယ်။ အသွင်ကူး ပြောင်းရေးနဲ့ Road Map က ဘယ်လို ချိတ်ဆက်မှု ရှိသလဲ မေးတော့ မရှိဘူးလို့ ပြောတယ်။ နယ်ခြား စောင့်တပ်ဆိုတာ နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းဆိုတာ သဘောပေါက်တယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်က ကေအိုင် အေ တပ် တခုတည်းကို ပြောနေတာ။ ကေအိုင်အိုမှာ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ... အစရှိတဲ့ ဌာန ၁၀ ခု ရှိတယ်။ ကေအိုင်အေဆိုတဲ့ စစ်တပ်က ကေအိုင်အိုရဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုပဲ။ တပ်တခုတည်းကို မပြောဘဲနဲ့ တဖွဲ့လုံးကိစ္စ ပြောပါ။ ဘယ်လောက်ထိ ညှိခဲ့လဲဆိုရင် ပူးပေါင်းလို့ရတာ ပူးပေါင်းမယ်။ ဥပမာ - ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကဏ္ဍတွေပေါ့။ နောက် ကေအိုင်အေကို နယ်ခြားစောင့် တပ် ပေးရင် ဘယ်လောက်ပေးမလဲ မေးတော့ မသိဘူးတဲ့။ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့သူနဲ့ အသက် ၁၀ နှစ်ကျော်ကို ဖယ်လိုက်ရင် တပ်ရင်း ၃၀ ရနိုင်တယ်၊ ပေးမလား ဆိုတော့လည်း မဖြစ်ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးက ပြီးသွားပြီ။ အဲဒီနောက်မှာ ဦးသန်းရွှေ (အငြိမ်းစား ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း) ဆီကို လိပ်မူပြီးတော့ ကေအိုင်အိုက စာပို့ခဲ့တယ်။ ပြည်ထောင်စု စကတည်းက ကချင်လူမျိုးတွေ ပါခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုထဲ တန်းတူရေး ရချင်ပါတယ်။ တပ်မတော် မှာ ဦးစီးချုပ် တယောက်တည်း ထားမယ်ဆိုလည်း လက်ခံမယ်။ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းပေး ပါ။ အဲဒီလို ဖွဲ့ရင် ကျနော်တို့ တပ်တွေကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်။ နိုင်ငံတော်တောင်မှ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံလို့ ခေါ်သေးတယ်။ ဘာလို့ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်လို့ မရနိုင်ရမှာလဲ။ ဒါ ကျနော်တို့ရဲ့ သဘောထားပါ။
Voice : ဟုတ်ကဲ့။ တိုက်ပွဲတွေ စဖြစ်ခဲ့တည်းက ညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ရင် ခုလိုအခြေအနေမျိုး ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး လို့ လေ့လာသူတွေက သုံးသပ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ဘာကြောင့် မညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့တာလဲခင်ဗျ။
GGM : တိုက်ပွဲတွေ မနှစ်က ဇွန်လ ၉ ရက်မှာ စဖြစ်တာနဲ့ ၁၃ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီထိ ကျွန်တော် တို့ဘက်က တိုက်မိန့် မပေးသေးဘူး။ ဦးအောင်သောင်းတို့၊ ဦးသိန်းဇော်တို့နဲ့ ဆွေးနွေးနေ တုန်း။ ကြာရင် မလိုလားအပ်တာ များလာမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတိုက်ပွဲ အမြန်ရပ်ဖို့ သူတို့ သမ္မတဆီ တင်ပြမယ်ဆိုတော့ သဘောတူတယ်။ ၁၃ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီအထိ စောင့်တယ်၊ သဘောတူညီ မှု မရခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် ၁၄ ရက်နေ့က စပြီး ကျနော်တို့ကလည်း တိုက်မိန့်ပေးလိုက်တယ်။ ဆွေးနွေးပွဲ တွေ စလုပ်ကတည်းက တိုက်ပွဲတွေ စဖြစ်တာပဲ။ အပစ်အခတ် ရပ်ဖို့အတွက် လက်မှတ်ထိုးရအောင်လို့ ပြောတယ်။ တခြားနိုင်ငံတခုကို သက်သေထားပြီး လုပ်ပေးပါ ပြောရင်လည်း အစိုးရက သိက္ခာရှိသေး တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာမပါနဲ့၊ ပြည်တွင်း ပြဿနာပဲတဲ့။ ဒါဆို ကတိတခုပေးပါ။ အစိုးရက နိုင်ငံအတွင်း မှာရှိတဲ့ တိုက်ပွဲတွေအားလုံး ရပ်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာကို ၁၅ ရက်အတွင်း ကြေညာပေးပါ။ ဒါလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ ဆွေးနွေးပွဲက ၃ ကြိမ်မှာ ပြီးသွားရောပဲ။ ခု ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ လုပ်ရမှာက တိုက်ပွဲတွေ လျှော့ချရေး။ ခုတပ်တွေ ရောနေတယ်။ အစိုးရတပ်က ရိက္ခာပို့တာတောင် ကျနော်တို့ တပ်မဟာ ၃ ကို ဖြတ်ပြီး ပို့ရတာ။ ခဏ ခဏ ရိက္ခာပို့ခွင့်တောင်းတုန်း။ ကူညီပေးဖို့တော့ စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့တော့ မကျဘူး။ မဟာဗျူဟာအရ နောက်ကျောရောက်နေတဲ့ တပ်ကို ခွာပေးပါ။ ခွာလိုက်ရင် တိုက်ပွဲတွေ လျော့သွားပါမယ်။ ဒုတိယ အဆင့်အနေနဲ့ ပင်လုံမှာ ကျင်းပသလို ညီလာခံ ကျင်းပရမယ်။ ဒုတိယပင်လုံလည်း မဟုတ်ဘူး။ နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေ ရှိတဲ့အတွက် ကချင်ကလည်း ကချင်တွေချည်း အစည်းအဝေးလုပ်ရမယ်။ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လည်း လုပ်ရမယ်။ ဘုံသဘောတူညီမှုပေါ့။ လက်တွေ့မှာတော့ အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ တပ်တွေ ရွှေ့ဖို့ ကိစ္စတွေမှာ မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ တပ်ကိစ္စတွေ ပါလာရင် ဆွေးနွေးလို့ မရတော့ဘူး။
GGM : ခုနက ပြောသလိုပဲ။ ဦးအောင်မင်းတို့နဲ့ တပ်ကိစ္စ ပြောရင် ဆက်ဆွေးနွေးလို့ မရတော့ဘူး။ နောက်တိုက်ပွဲ တနှစ်ကျော်လာတဲ့အထိ တိုက်ပွဲကိစ္စကို လွှတ်တော်က ဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲ။ မစဉ်းစားဘူးလား။ ဆွေးနွေးတယ်ဆိုရင် ဒီတိုက်ပွဲတွေကို အစိုးရက ခွင့်ပြုလို့ တိုက်နေတာလား။ ဒါတပိုင်း။ နောက် ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ ပြောနေတဲ့စကား လွှတ်တော်အနေနဲ့ ဘယ်မှာ ရပ်ပြီး ပြောနေ တာလဲ။ ကချင်ပြည်နယ်က လွှတ်တော်အမတ် ဦးစခုန်တိန့်ယိမ်းက တိုက်ပွဲမှာ လာဦးစီးနေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ရှိတယ်။ လွှတ်တော်မှာ ဘယ်လို ခွင့်တောင်းပြီး စစ်ပွဲ ဦးစီးရသလဲ။
Voice : လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ (RFA) မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်ပေးတဲ့ ဦးညိုအုန်းမြင့်က ပြောသွားတာရှိတယ်။ ကေအိုင်အိုက အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း လက်ခံတယ်။ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဦးစီးချုပ်တယောက်တည်း ရှိရမယ် ဆိုတာကိုလည်း လက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရလူကြီးတွေကို ကေအိုင်အိုက မယုံကြည်ကြဘူးလို့ ပြောထားတာ ရှိပါ တယ်ခင်ဗျ။ ကေအိုင်အိုရဲ့ သဘောထားက လက်ရှိအစိုးရအပေါ် ဘယ်လို သဘောထားရှိသလဲခင်ဗျ။
GGM : အဓိက လူမဟုတ်ပါဘူး။ မူပါပဲ။ အရင်ကတည်းက အခြေခံဥပဒေပဲ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ တခြားသူ ဥက္ကဋ္ဌ တက်လုပ်လည်း ဘာမှမပြောင်းဘူး။ အဓိကက ဥပဒေပဲ။ ကျနော်တို့ ကေအိုင်အို အမည်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ် ရမလားလို့ မေးတော့ နေပြည်တော်ကို လှမ်းမေးကြတယ်။ ရတယ်တဲ့။ နောက်နှစ်ရက်ကြာတော့ မရဘူး ဖြစ်ပြန်တယ်။ ကျနော်တို့က ဒီဂရီကုန်တဲ့အထိ ညှိပေးခဲ့ပြီးပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်။ ဒုတိယသက်တမ်းမှာမှ ဝင်မယ်။ ပထမသက်တမ်းမှာ ဒီပုံစံမှာပဲ နေမယ်။ ၁၇ နှစ်လုံးလုံး ဆွေးနွေးဖို့ စောင့်နေခဲ့တာ။ ခု လက်မှတ်ထိုးရုံနဲ့တော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရမသွားနိုင်ဘူး။ သဘောတူလက်မှတ်ထိုးတာက စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းတာနဲ့ တူတယ်။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာက မင်္ဂလာဆောင်တာနဲ့ တူတယ်လို့တောင် ဦးအောင်မင်းကို ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
Voice : ခုလက်ရှိက ဒုက္ခသည်တွေလည်း တသိန်းနီးပါး ရှိနေပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်က ဖားကန့်မှာ လက်နက်ကြီး ထိပြီး ကျောင်းသူလေး သေဆုံးသွားရတာတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ငြိမ်းချမ်း ရေးအတွက် ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ ရှိပါသလား။
GGM : ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လူထုအစည်းအဝေးနဲ့ လုပ်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ နောက်တခု တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ လူထုဒုက္ခရောက်တာ မှန်တယ်။ တိုက်ပွဲမဖြစ်တုန်းကရော ဒုက္ခ မရောက်ဘူးလား။ မြန်မာပြည်က တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲ ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာပါ။ ကချင်တွေ စိတ်ထဲမှာ တိုက်ပွဲ ကြာလာရင် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာမယ်၊ ကြာရင် ထိန်းရခက်မယ်၊ ဒါကြောင့် တိုက်ပွဲ ကို အရင်ဖြေရှင်းရမယ်လို့ ဦးအောင်မင်းကို ပြောခဲ့တယ်။ လူထုဖိအား ပါလာရင် ဆုံးဖြတ်ရခက်မယ်။ တိုက်ပွဲတွေများလာရင် လူထုက နာကြည်းမှုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေ ထိန်းမနိုင်ရင် ခက်မယ်လို့ အစကတည်းက ပြောခဲ့တယ်။ ဖားကန့်မှာ ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်လည်း ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ကွန့်မင့်ပေးကြတာတွေကို မယုံနိုင်ဘူး။ မိသားစုတွေလည်း ပေါက်ကွဲကြတာတွေလည်း ပါတယ်။ မှားပစ်ကြတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဘယ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မှားတာတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လဲ မယုံနိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက အများကြီးပဲ။ ဗုံးတလုံးကွဲရင် ကျနော်တို့ဆီကလား။ သူတို့ဆီကလား ဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြား မသိရဘူး။ မှားပစ်ရင်းနဲ့ပဲ နောက်ပိုင်း ရွာထဲမှာ ဝင်ပစ်သွားကြတာ။ ကျနော်တို့ စဆွေးနွေးကတည်းက မူတခုချပြီးတာနဲ့ မြစ်ကြီးနားမှာ တွေ့မယ်လို့ တရားဝင် ကြေညာထားပြီးသား ပါ။ အခု ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ် ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ တောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ ပြောတာက ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတော်က တာဝန်ပေးထားတဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့မယ်။ ဒု-ချုပ်မှ၊ ကာချုပ်မှ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ခုနောက်ဆုံး နေပြည်တော်မှာ ဆွေးနွေးရအောင် ပြောတယ်။ မူမရှိဘဲ နေပြည်တော်မှာ ဘာသွားဆွေးနွေးမလဲ။ ဘယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးမလဲ။ အဓိက မူတခုရှာ။ နေရာ အဓိက မဟုတ်ဘူး။ မူပဲ။
Voice : ကေအိုင်အိုနဲ့သာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲနိုင်ရင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်လို့ ရပြီလို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကေအိုင်အိုက ဘယ်လို မှတ်ချက်ပြု ချင်ပါသလဲခင်ဗျ။
GMM : ကေအိုင်အိုအနေနဲ့က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး တခုတည်း မပြောဘူး။ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတဲ့ ကတိကို ရချင်တာ။ ကတိမရဘဲနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဘာလုပ်မလဲ။ ပြန်ပစ်ကြမှာပဲ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်မယ့် ကတိတော့ မလိုချင်ဘူး။ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိ မရဘူး။ ၂၀၀၈ ထဲ ဝင်လာပါ ပြောတယ်။ ဒါဆိုရင် ဆက်သွားလို့ မရတော့ဘူး။ သမ္မတရဲ့ ပထမဆုံး မိန့်ခွန်းမှာလည်း တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကို ရည်ညွှန်းပြောတာ ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေကို ရည်ညွှန်းပြောတာ မပါဘူး။ ဒါကြောင့် အစိုးရက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဘယ်လို သဘောထားသလဲ။ သောင်းကျန်းသူ၊ အခွင့်အရေးတောင်းသူလို့ သဘောထားလား။ သောင်းကျန်းသူလို့ သတ်မှတ်ရင် သောင်းကျန်းသူအနေနဲ့ပဲ သူ ဖြေရှင်းမှာပဲ။ နောက်တခုက ပင်လုံစာချုပ်အပေါ်မှာ ခုလက်ရှိ အစိုးရက ဘယ်လိုသဘောထားလဲ မေးတာ ခုထိ အဖြေမရဘူး။ အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်လို့ရတဲ့ ဥပဒေပေါ်ဖို့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားရမယ်။ ခု သမ္မတ ပြောတဲ့ဟာ စာချုပ်ကို ကြည့်လေ။ ခုဟာက ယာယီ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးပဲ။ ဘာမှ တိတိကျကျ မရှိဘူး။ ရှမ်းနဲ့လည်း တိုက်ပွဲ ပြန်ဖြစ်တာပဲ။ ဒါကြောင့် အာမခံချက် မရှိဘဲ စာချုပ်ကြီး ချုပ်ပြီး နောက်ဖြစ်လာမယ့် စစ်ပွဲအတွက် ပြင်နေတာမျိုးနဲ့တော့ မရပ်ချင်ဘူး။
ကေအိုင်အေ ပြန်ကြားရေးမှူး ဦးလနန်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ကေအိုင်အေ ပြန်ကြားရေးမှူး ဦးလနန်
မေး - ကေအိုင်အေနဲ့ တပ်မတော်ကြား ၁၉၉၄ မှ အပစ်အခတ် ရပ်စဲလာတယ်။ ၂၀၁၁ ဇွန်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ဖြေ - တိုက်ပွဲကတော့ ၂၀၁၁ ဇွန်လမှာ ပြန်ဖြစ်လာတယ် ဆိုပေမယ့် တချိန်ချိန်မှာ ပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကို သွားနေတယ်။ အစိုးရကနေပြီးတော့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို နိုင်ငံရေးနဲ့ ဖြေရှင်းတဲ့ကဏ္ဍ မရှိဘဲနဲ့ စစ်ရေးနဲ့ပဲ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း ကိုင်ထားတဲ့ လက်နက်ကို ဘယ်လို သိမ်းဆည်းမလဲ ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချဉ်းကပ်တယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ် ပါတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
မေး - အခုလောလောဆယ်ဆယ် အစိုးရနဲ့ ဆရာတို့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ကွဲလွဲနေတဲ့ အချက်တွေက ဘယ်နှစ်ချက်လောက်ရှိပါသလဲ။
ဖြေ - အစိုးရစစ်တပ်ဟာ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာရဲ့ အကြောင်း တရားကို အဓိကမထားဘဲနဲ့ လက်နက်ကို ဘယ်လိုဖြုတ်သိမ်းမလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စက ပထမအချက်ပါ။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ အမြဲတမ်း ပြောနေတဲ့အချက်ကတော့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်က အဓိကပါ။ နိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့ ဖြေရှင်းမယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ ပြောဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြေရှင်းပုံနည်းလမ်းတော့ ရှိပါတယ်။ အဓိက ဘာလဲဆိုတော့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ စပြီးတော့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုတာ စပြီး ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တယ်။ အဲဒီပြည်ထောင်စုရဲ့ မူဝါဒအတိုင်း စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုပုံစံ နိုင်ငံရေးဖြေရှင်းပုံ၊ ဖြေရှင်းနည်း၊ နည်းလမ်းက အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျ။ ဒီကိစ္စက အဓိကကွဲလွဲချက်ပါ။ အခု အစိုးရက ဘာလဲဆိုတော့ ဥပဒေထဲကို ၀င်မယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံ ဥပဒေအတိုင်းပဲ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု လုပ်ကြမယ်လို့ ရွေးစရာပါတယ်။ ဒါလည်း အဓိကွဲလွဲချက်ထဲမှာ ပါတာပါ။
မေး - ၂၀၁၁ ဇွန်လပိုင်းကနေ အခုအချိန်ထိ ဆရာတို့နဲ့ တပ်မတော်ကြားဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲကြိမ်ရေ ဘယ် လောက်များ ရှိသွားပါပြီလဲ။
ဖြေ - မှတ်တမ်းယူထားတဲ့ စာရင်းအရဆိုရင် ၁,၈၂၀ ရှိသွားပါပြီ။
မေး - ဆရာတို့အနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ၃ ကြိမ်၊ ပြည်နယ်အဆင့် ၃ ကြိမ်၊ အလွတ်သဘော ၄ ကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အထဲမှာ တူညီချက်ရတဲ့ အချက်တွေ ဘာတွေရှိပါပြီလဲ။
ဖြေ - တွေ့ဆုံမှုကတော့ ၉ ကြိမ်လောက် ရှိပါပြီ။ အခု ကျနော်တို့ရှိတဲ့ နေရာမှာလည်း ပြည်နယ်အဆင့် ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းအောင်အဖွဲ့နဲ့ တွေ့တယ်။ ဦးအောင်သောင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ တွေ့တယ်။ နောက်ပိုင်း ဦးအောင်မင်းနဲ့ အလုပ်သဘော တွေ့တာမျိုးရှိတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံမှုအပေါ်မှာတော့ အားလုံး က ပြေပြေလည် လည် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အနေနဲ့ အမြင်ဖလှယ်တာမျိုး ရှိခဲ့ကြတာပေါ့။ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွေကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ ပြောဆိုလာတဲ့အခါမှာတော့ ရောက်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ကနေပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ကတိပေး ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပါမလာဘူး။
မေး - ပြီးခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်သော် ပြောသွားတာက အခု ကချင်ပြည်နယ် မှာ ပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာဟာ ကေအိုင်အေက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို မဆွေးနွေးဘဲ နိုင်ငံရေး အရ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားလို့ လို့ ပြောပါတယ်။ ဆရာ့အမြင် ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ဖြေ - ဒါဟာ ကေအိုင်အိုအဖွဲ့အစည်းကို အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ ပေးထားတဲ့ သင်ခန်းစာအရ ပြောဆို မှုပါ။ ၁၉၉၄ မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်ခဲ့တဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူချက်တွေ နိုင်ငံရေးအဆင့်ကို သွားကြမယ် ဆိုပြီးတော့ ကတိတွေပေးကြတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀ နှစ်ကျော် လုပ်လာတဲ့အခါမှာ နောက်ဆုံး ကျတော့ နိုင်ငံရေးရပ်ဝန်းကို ရောက်မလာဘဲနဲ့ ကေအိုင်အိုမှာရှိတဲ့ ကေအိုင်အေတပ်ကို ဘယ်လိုဖျက်သိမ်း မလဲဆိုတဲ့ အပိုင်းကို ရောက်လာပြီ။ ကျနော်တို့ ပြန်ပြောတဲ့ ကိစ္စက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ၁၀ နှစ်ကျော် လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တခုနဲ့ပဲ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းကို နိုင်ငံရေးသိက္ခာ ပျက်ပြယ်သွား အောင် လုပ်ထားတာမျိုး ရှိခဲ့တယ်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆိုတာဟာ ပစ်ခတ်မှုဟာ အဓိက မဟုတ်ပါ ဘူး။ အဓိက ကတော့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာ အဓိက ဆွေးနွေးကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကို ဆွေးနွေးမှု အဆင့်ဆင့် အတိုင်း အကောင်းဘက်ကို သွားမယ် ဆိုရင် ဒီရှေ့တန်းမှာဖြစ်တဲ့ ပစ်တာခတ်တာတွေဟာ သူ့ဟာသူ ပျက်ပြယ်သွားမှာပါ။ အမှန်တကယ် လည်း ဒီပြဿနာဟာ နိုင်ငံရေးပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ စားပွဲပေါ်မှာပဲ ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စပါ။ စစ်မြေပြင် မှာ ဒီကိစ္စဟာ ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရောက်အောင် တိုင်းရင်းသားတွေ တောင်းဆိုနေတဲ့အတိုင်း ဆွေးနွေး မှုလမ်းကို ရောက်အောင် ဖော်ဆောင်ပေးဖို့ လိုတယ်။ အဲဒီလို ဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကိစ္စဟာ လက်မှတ်ထိုးစရာ မလိုဘဲနဲ့ သူ့ဟာသူ ပြေငြိမ်းသွား မယ့်ကိစ္စပါ။ ကျနော်တို့လည်း အဲဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်း သွားတာပါ။ ဒီလမ်းကြောင်းကို သွားရတဲ့ကိစ္စ ကလည်း ၉၄ ကနေ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ရထားတဲ့ ခါးသီးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက သင်ခန်းစာပေးသွား တာပါ။
ဖြေ - အများကြီးရှိပါတယ်။ ၉၄-၉၅ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးအရ အပြောအဆို လုပ်တယ်။ နောင်အရပ်သားစစ်အစိုးရ တက်လာတဲ့အခါမှ ပြောဆိုကြပါ။ အစီရင်ခံစာက ကျနော်တို့ ဘက်ကို အင်လွှတ်တာမျိုး ရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အမျိုးသားညီလာခံမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံး ကိုယ်စားအနေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အခြေခံဥပဒေ ဖယ်ဒရယ်ပုံစံပေါ်လာအောင် စာတမ်းတွေ အများကြီး တင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက အမျိုးသားညီလာခံ ကျင်းပရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဟာလည်း အခုလက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ တင်ပြခဲ့တဲ့အဆိုတွေ၊ ဥပမာ - တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု လက်ခံတာမျိုး မလုပ်ဘဲနဲ့ အားလုံးပယ်ချခံရတယ်။ ဒါတွေဟာ ဘာလဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ နိုင်ငံရေးအပိုင်း အခွင့်အရေးတွေကို ဥပေက္ခာပြုတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ကာလအတွင်းမှာ ကေအိုင်အေတပ်စခန်းတွေ တည်ရှိရာ နေရာတွေမှာ စစ်တပ်က စခန်းတွေ အများကြီး တိုးချဲ့လာခဲ့တယ်။ နယ်မြေစိုးမိုးရေးကို တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကာလ ၉၄-၂၀၁၀ အတွင်းမှာလည်း ကျနော်တို့ရဲ့ တပ်စခန်းတွေကို ၀င်စီးပြီးမှ သတ်ဖြတ်ပစ်ခတ် တာမျိုး လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ နောက်ဆုံးကျတော့ နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ မသုံးဘဲ အစိုးသစ်မပေါ်ခင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ကျနော်တို့ဘက်ကို လက်နက်ကိုင်တွေ ပုံစံပြောင်းသွားအောင် နယ်ခြားစောင့်အသွင် ပြောင်းဖို့ လှုပ်ရှားပေးလာတယ်။ ဒါတွေဟာ နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ နယ်မြေစိုးမိုးရေး၊ စစ်အာဏာရှင် လက်နက်အားကိုးပြီးမှပဲ နေရာဒေသကို စိုးမိုးနိုင်ရေး အဲဒီလို ချဉ်းကပ်ခဲ့တာဟာ ခါးသီးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေပါ။
မေး - လက်ရှိ သမ္မတက ကချင်စစ်ပွဲများ ရပ်တန့်သွားအောင် ကေအိုင်အေဘက်ကလည်း ပစ်ခတ်၊ တိုက်ခိုက်မှုများကို တားဆီးတဲ့အမိန့်တွေ ထုတ်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ ဆရာတို့အမြင်ကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ဖြေ - ဒါဟာ ပြဿနာရဲ့ ဖြေရှင်းပုံ မဟုတ်ဘူး။ ရှောင်လွဲလိုတဲ့ကိစ္စပါ။ အဲဒီလို ရှောင်လွဲတဲ့ အကျင့် တွေကို ဆယ်စုနှစ်တခုကျော် အစိုးရဘက်က လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ်ဟာ ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းအေးသွားတာမျိုးမရှိဘူး။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ရုံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တည်ငြိမ် သွားဖို့ဆိုတာ အကြောင်းတရား မညီပါဘူး။ ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စက အရေး ကြီးတဲ့ကိစ္စပါ။ အစိုးရက အပစ်အခတ်ကို မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ကချင်ဒေသမှာ ထိုးစစ် အများကြီးဆင်ခဲ့တယ်။ ကေအိုင်အေတပ်စခန်း တော်တော်များများကို သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တပ်မဟာ - ၄ ဒေသမှာလည်း အားလုံးကို ရှင်းပစ်လိုက်တယ်။ ဇန်န၀ါရီလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ အတောအတွင်းမှာ တပ်မဟာ ၃ ဒေသမှာရော၊ တပ်မဟာ ၅ ဒေသမှာရာ နောက်ဆုံး ဇူလိုင်လအထိ ကေအိုင်အေရဲ့ ရှေ့တန်းစခန်းတွေကို သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ရပ်တန့်မယ်ဆိုတာ သံတမန်နည်းလမ်းအရ ပြောတဲ့ စကားရပ်တွေပါ။ ရှေ့တန်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာက အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ အမြဲတမ်း ပစ်ခတ်မှုလုပ်နေကြတဲ့ ကေအိုင်အေတပ်စခန်းတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ချဉ်းနင်းဖယ်ရှားသွားရမယ် ဆိုတဲ့ အထက်က ညွှန်ကြားချက်တွေဟာ အမြဲတမ်း ပို့လွှတ်နေတာပါ။ ရှေ့တန်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စကို နိုင်ငံထိပ်ပိုင်းမှာ တာဝန်ယူနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း သိရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။
မေး - ကေအိုင်အေတပ်စခန်းတွေကို သိမ်းပိုက်လိုက်တာ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဖြစ်နေတာလဲ။ စခန်း ဘယ်နှခုလောက်ရှိပြီလဲ။
ဖြေ - အရေအတွက်နဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် တော်တော်များပါတယ်။ ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပဲ တပ်မဟာ ၅ အဆွယ် မှာရှိတဲ့ ခေါ်ဘွမ်း ဆိုတဲ့ စခန်းကို အင်အား ၂၀၀ လောက်နဲ့ သိမ်းလိုက်တယ်။ ၁၂၀ မမ အမြောက်တွေ ထားဖို့ ညွှန်ကြားတာရှိတယ်။ အဲဒီစခန်းဟာ ကျနော်တို့ လိုင်ဇာနဲ့ ခုနစ်မိုင်လောက်ပဲ ဝေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တပ်မဟာ ၃ ဒေသမှာရာ ကျနော်တို့စခန်းတွေကို ၀င်စီးတာ ရှိတယ်။ တပ်မဟာ ၄ မှာလည်း အတော်များများ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့စခန်းနဲ့ အနီးဆုံးနေရာမှာ တပ်အင်အား တွေကို ဖြည့်တင်းထားတာမျိုး ဆက်တိုက်လုပ်နေတယ်။
မေး - မြစ်ဆုံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အရင်ဆုံး ကန့်ကွက်ခဲ့တာ ဆရာတို့ အဖွဲ့အစည်းလို့ သိရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဆရာတို့အဖွဲ့တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနည်းသွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဖြေ - မြစ်ဆုံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မဆောက်သင့်တဲ့အကြောင်းကို သူတို့တတွေရဲ့ လက်မှတ် တွေကို နယကဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆီကို ပေးပို့တာမျိုး ရှိခဲ့တယ်။ တရုတ်အစိုးရကိုလည်း လူထုတွေရဲ့ ကန့်ကွက်စာ ပေးပို့တာမျိုး ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီကိစ္စမှာ လူထုတွေကို ၀ိုင်းပြီး ကန့်ကွက်ကြဖို့ ဆော်သြတာမျိုး မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကေအိုင်အိုမှာ တပ်ဖွဲ့ပေါ်လစီအရပါ။ ဒီလိုစီမံကိန်းမျိုးကို ဆော်သြပြီး ၀ိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ကြပါ ဆိုတဲ့ဟာမျိုး လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တရားဝင် ပုံစံနဲ့ပဲ ချဉ်းကပ်မှာပါ။
မေး - မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်တာ တနှစ်ပြည့်သွားပါပြီ။ ၂၀၁၅ ကျရင် မြစ်ဆုံဟာ အပေါင်းထွက်မလား၊ အနုတ်ထွက်မလားဆိုတာ ကျနော်တို့ မသိခဲ့ရပါဘူး။ ဆရာတို့အဖွဲ့ရဲ့ အမြင်ကိုလည်း သိပါရစေ။
ဖြေ - စီမံကိန်းအတွက် သဘောတူညီထားကြတဲ့ အစိုးရနဲ့ စီမံကိန်းကို အမှန်တကယ် လုပ်မယ့် စီပီအိုင်ကုမ္ပဏီတို့ကြားမှာ ဘယ်လိုသဘောတူညီချက်မျိုးတွေ ရထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်က အဓိက အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလူထုရဲ့ အင်အားဟာ ဘယ်လောက်အထိ ဒီဆန္ဒကို ခိုင်ခိုင်မာမာ စွဲကိုင်ထားနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်း အဲဒီအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကချင်လူထုကတော့ ရာသက်ပန် ကန့်ကွက်ကြမှာပါ။
မေး - နောက်ထပ် ဘာပြောစရာ ရှိပါသေးသလဲ။
ဖြေ - ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ ဆယ်စုနှစ်ချီတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်တွေဟာ နိုင်ငံရေးပြဿနာလို့ပဲ ပြောလို့ ရတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ ကိစ္စဟာလည်း နိုင်ငံရေးပြဿနာပါ။ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကို ၀ိုင်းပြီး တည်ဆောက်ကြပါစို့ ဆိုပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ၁၉၄၆ ကနေပြီးတော့ စည်းရုံးရေးလုပ် တယ်။ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စကားကို ယုံကြည်ပြီးမှ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းလာဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပြီးမှပဲ သဘောတူညီချက် ထုတ်လိုက် ကြတယ်။ ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်လည်း ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ပေါ်ထွန်း လာခဲ့တယ်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပေါ်လာတဲ့ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဟာလည်း ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မူ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ပြည်ထောင်စုအစစ်ပုံစံနဲ့ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ပြည်တွင်းစစ် ပေါ်ပေါက်လာမယ့် မျိုးစေ့ကြီးပါ။ ပြဿနာတွေ ပြန်ဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင် ပြဿနာ တွေရဲ့ အဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲကိုပဲ မီးမောင်းထိုးတာမျိုးမလုပ်ဘဲ ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ။ နိုင်ငံရေးပြဿနာ ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ အစိုးရဘက်က လိုလား နေတဲ့ ပုံစံတခုနဲ့ပဲ သွားမလား။ တိုင်းရင်းသားတွေ ပြောဆိုနေတဲ့ အသံကိုပဲ နားထောင်ရမလားဆိုတဲ့ ကိစ္စအပေါ်မှာ တာဝန်ရှိတဲ့ အစိုးရတွေကနေပြီးတော့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ့် အချက်တခုရှိတယ်။ အခုထိ အစိုးရဟာ ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းကြမယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုနဲ့ သွားကြမယ်ဆိုတဲ့ စဉ်းစားချက်တွေ ပြောဆိုချက်တွေ တခုမှ မကြားရသေးဘူး။ ဒါဟာ ဘာလဲဆိုတော့ သူတို့မူထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုမူနဲ့ ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိသရွေ့တော့ ပြည်တွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်ကို တက်လှမ်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
နိုင်ငံရေးပြဿနာအား နိုင်ငံရေးအရဖြေရှင်း၇န် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေတ်အဆက်ဆက်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ မအောင်မြင်ရခြင်းမှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာအား နိုင်ငံရေးအရမဖြေရှင်း၍ ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌပြောကြား
Friday, 12 October 2012 21:59
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေတ်အဆက်ဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ မအောင်မြင်ရခြင်းမှာ နိုင်ငံရေး ပြဿနာအား နိုင်ငံရေးအရမဖြေရှင်း ၍ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေး သာအောင် က ပြောကြားခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ဒို့ရိုးရာစားသောက်ဆိုင်တွင်ပြုလုပ်သော ပါတီ ၂၄ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား၌ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများဆွေးနွေးစဉ်အချိန်မှာပင် တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွား နေသည်ကို ကြားသိရကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲချင်သည် ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသည်ဆိုရုံဖြင့် ပြုလုပ်၍မရဘဲ အကောင်အထည်ဖော်ရန် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်မှန်ဖို့ လိုကြောင်း၊ လတ်တလောတွင် ကရင်ပြည်နယ်၌ တပ်နှင့်ဗဟို တစ်ကွဲတစ်ပြားစီဆွေးနွေး မှုများသည် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်မမှန်ဘူးဟု ပြောချင်ပါကြောင်း၊ စေတနာရှိရုံဖြင့်မရကြောင်း စသည်ဖြင့်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာ အောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
"ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်အတွေ့အကြုံအရ ယခင်ကတည်းက ပြည်တွင်းအေးချမ်းဖို့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မကြာ သေးခင်ကလည်း န၀တ၊ နအဖခေတ်မှာလည်း ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့် မအောင်မြင်တာလဲ။ ဘာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရတာလဲ ဒါကိုမှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ခေတ်အဆက်အဆက်ဆွေးနွေးပွဲတွေ မအောင်မြင်ရတာဟာ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းရန် မကြိုးစားလို့ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါလီမန်ခေတ်၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်၊ လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်၊ ခေတ်အဆက်ဆက် တိုင်းရင်း သား များတင်ပြခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးရန်တောင်းဆိုချက်မှာ ပင်လုံအခြေခံသဘော တူညီချက်ဖြင့် ဖြေရှင်းရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ပင်လုံတွင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် အဓိက သုံးချက် ရှိကြောင်း၊ ပထမအချက်မှာ တန်းတူညီတူပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်ပေါင်းစည်းရေး၊ ဒုတိယအချက် မှာ ပြည်နယ်များတွင်ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေးနှင့် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရရှိရေး၊ တတိယ အချက်မှာ ခွဲထွက်ဖို့ကြောင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌဦးအေးသာအောင်က ယခင်ကတိုင်းရင်းသားများ ၏တောင်းဆိုချက် များကို ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆက်လက်၍ ဥက္ကဋ္ဌဦးအေးသာအောင်က "ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်တို့လို တိုင်းရင်းသားပါတီများအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ခွဲထွက်ဖို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ဘယ်ပါတီမှ ဒီနေ့ ဒီအချိန်အခါ ဒီအခြေအနေအရ ဒါတွေကို တောင်းဆိုတာ ပြောဆိုတာတွေမရှိတော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ တန်းတူညီတူပြည်ထောင်စုမူ၊ ပြည် နယ်တွေမှာကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို အဓိကတင်ပြတောင်းဆိုနေတာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအချိန်ကာလသည် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ပြောခွင့်ဆိုခွင့်၊ စည်ရုံးခွင့်များ ယခင်ကထက်အတော် အသင့်ရရှိလာကြောင်း၊ စာနယ်ဇင်းရေးသားခွင့်၊ လွတ်လပ်ပြောဆိုခွင့်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ရှေ့ဆက်သွားမည့်နေရာတွင် အခွင့်အရေးများ မျှော်လင့်ချက်များ အတော်အသင့်ရှိလာ ပြီဟုထင်ရကြောင်း၊ သို့သော် ပြည်သူအများမျှော်လင့်နေသည့် တိုင်းပြည်ကလိုလားနေသည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားများအားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်ပြီး ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ကိုထည်ထောင်နိုင်ရေး၊ စစ်ပွဲများရပ်စဲရန်နှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေး အဓိက ကဏ္ဍများတွင် ချောချောမောမောဖော်ဆောင်နုိုင် မဖော်ဆောင်ဆိုသည်မှာ ယနေ့အချိန်အခါတွင် ပြောရန်အလွန်စောသေးကြောင်းကိုလည်း ဦးအေးသာအောင်က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 3:26 PM No comments:
Despite war against ethnic Kachin, the US invites ...
Scottish independence: Cameron and Salmond strike ...
Situation of human rights in Myanmar - Report of t...
နိုင်ငံရေးပြဿနာအား နိုင်ငံရေးအရဖြေရှင်း၇န် ရခိုင်ဒ...
SHARE SHAGAN - 12